Dubartoota 100: Dubartoonni 137 Addunyaarraa guyyaa tokkotti ajjeefamu - BBC News Afaan Oromoo
Dubartoota 100: Dubartoonni 137 Addunyaarraa guyyaa tokkotti ajjeefamu
Goodayyaa suuraa Giddugaleessaan dubartootni 137 tahan miseensa maatiin ykn hiriyyaa dhiyoon adunyaarraa guyyaa tokkotti ajjeefamu
Giddugaleessaan dubartoonni 137 tahan addunyaa irraa hiriyyoota ykn miseensa maatiidhaan guyyaa guyyaatti ajjeefamu jedha ragaan Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniitti Waajjira Daawwaa fi Yakkaa.
Dubartootni irra caalaa kan ajjeefamaa jiran manattidha jedhan. Bara 2017 keessa dubartoota ajjeefaman jedhaman 87,000 keessaa walakkaa ol kan tahan harka miseensa maatiidhaan ykn hiriyyaan ajjeefaman.
Lakkoofsa kana keessaa tilmaamaaan dubartootni 30,000 tahan hiriyyoota itti dhiyaataniin yommuu ajjeefaman kan 20,000 tahan ammoo firoota isaaniin ajjefaman.
BBC 100 Women lakkoofsa ajjeechaa kana dudduuba dubartoota akkamiitu jira kan jedhu bira gahuuf ajjeechaa saalaan wal qabatee gabaafamaa ture ji'a Onkoloolessaa irraa eegaluun duukaa bu'aa tureera.
Kanaa gadittis odeeffannoowwwan arganne akkasiin isiniif qoodneerra.
Goodayyaa suuraa Dubartoota maatiin ykn firaan ajjeefaman
Hammi lakkoofsa dhiirota ajjefamanii ammayyuu olka'aadha
Ragaan Dhaabbata mootummoota Gamtoomanii [UNODC] dhaan walitti qabame akka agarsiisutti dhiironni warra dubartootaa caalaa itti yaadamee ajjeefamu.
Adunyaa irraa dhiirota kudhan  keessaa saddet  ajjeechaan miidhamoodha jedha ragaan Dhaabbata Mootummota Gamtoomanii.
Haa tahu malee dubartoota ajjeefaman keessaa kudhan keessaa saddetii ol kan tahanis namootuma itti dhiyaataniin lubbuuu isaanii akka dhaban gabaasichi agarsiisa.
Ajjeechaan hiriyyaan ykn nama dhiyoon raawwatu kun lakkofsi isaa dubartoota irratti ol ka'a.
Goodayyaa suuraa Ajjeechaa dhiiraa fi dhalaa irra gahu gabatee agarsiisu
Guyyaa tokkotti dubartoota 47 biyyota 21 keessatti
Dhaabbatni Mootummota Gamtoomanii ragaa bara 2017 odeeffannoo mootummaa irraa argateen yommuu xiinxaleera.
Lakkoofsi ajjeechaa saala bu'uureffatee ''femicide'' yommuu xiinxalamu gaafa Onkoloolessa 1 bara 2018 adunyaa irraa kan gabaafame biyyota 21 keessaa dubartoota 47 dha.
Ajjeechaan kun irra caalaan isaa qoratamaa jira.
Isaan kunneen ajjechaa miidiyaalee biyya keessaan gabaafamuun qondaaltota mootummaa naannoon adda bahee BBC'n isaan qunnamedha.
Goodayyaa suuraa Yuudit Cheesaangaa
Indiyaatti miseensonni maatii hundi fannifamanii argaman
Yuudit Cheesangaa umurii 22, Keeniyaa
Wiixata gaafa Onkoloolessa 1 Yuudit Cheesangaa fi obboleeettiin ishee Naansiin gara ooyiruu isaanii deemanii boobee waliiti qabaa turan.
Yuudit haati ijoollee sadii dhiyeenyuma abbaa manaa ishee Laabaab Kamureen irraa adda baahuun gara ganda maatii ishee Kaaba biyyittitti deebiteetti.
Yeroo isheen obboleettii ishee waliin gara ooyiruutti baatee hojii jalqabdu achuma deemee miidhaa irraan gahee ishee ajjeese.
Akka poolisiin jedhetti namtichis yerosuma jirattota gandichaan ajjeefame.
Goodayyaa suuraa Ragaa ajjeechaa dubartoota irra gahu agarsiisu
Afrikaan ardii dubartootni baay'inaan miseensuma maatii isaaniin ykn hiriyyaa isaaniin ajjeefamanidha. Ragaan Dhaabbata Mootummota Gamtoomanii akka agarsiisutti ajjeechaan akkasii namoota 100,000 keessaa hamma [rate] 3.1'n raawwata.
Eeshiyaan ardii dubartootni heduun bara 2017 keessa baay'inaan itti ajjeefaman walumaagalaan 20,000 taateetti.
Goodayyaa suuraa Nehaa Sharaad Chawuduurii
Nehaa Sharaad Chawuduurii, ganna 18, Hindi
Nehaa Sharaad Chawuduurii gaafa guyyaa dhaloota ishee ayyaaneffatu ajjeefamte. Hiriyyaa ishee dhiiraa waliin bakkeetti ayyaaneffataa turte. Akka polisiin jedhutti maatiin ishee hariiroo isaanii kana kan jaalalaa tahuu hin mirkaneessine.
Maatiin ishee fi namni biraa fira isaanii tahe tokko halkan sana manuma jireenyaa isaaniitti ajjeesaniiru jedhamuun himatamaniiru.
Qorannoon akkuma itti fufetti tahee sadan isaanii to'annoo seeraa jala tahuun dhimma isaanii hordofaa jiru.
Maatiin ishee gochaa kana haalaniiru jedhe ogeessi seeraa isaan bakka bu'u. Namootni dhibbatti lakkaa'aman jaalala keessatti kufuun ykn fedha maatii isaaniin ala fuudhuun ykn heerumuun wagga waggaatti lubbuu isaanii dhabu.
Goodayyaa suuraa Zeeyinab Sekaanvan,
Zeeyinab Sekaanvan, 24, Iraan
Zeeyinab Sekaanvan abbaa manaa ishee waan ajjeefteef qondaalota mootummaan ajjeefamte.
Zeeyinab Kaaba Iraanitti maatii harka qalleeyyii gosa Kuurdish irraa dhalatte guddatte. Jireenya gaarii jiraachuuf jecha ijoollummaan heerumatti galte.
Dhaabbanni Aminestii Internaashinaal akka jedhetti abbaan warraa ishee baay'ee hamaa fi eeyyama gaa'ila hiikuu akka ishee dhowwateera hima.
Yeroo umuriin ishee waggaa 17 guutu abbaa warraa ishee ajjeesuudhaan adabamtee lubbuu ishee dhabde.
Deeggartootni ishee Aminetsii Internaashinaal dabalatee akka abbaa manaa ishee ajjeeste akka amantuuf jecha akka malee miidhaan irraan gahuun poolisiinis haala suukaneessaan ishee reebee ajjeese jedhan.
Goodayyaa suuraa Saandira Lusiyaa Hamer Mooraa
Saandira Lusiyaa Hamer Mooraa, 39, Braazil
Saandira Lusiyaa Hamer Mooraa umurii waggaa 16'n nama Aguustoo Aguweer Riibeeroo jedhamutti heerumte.
Yeroo ishee ajjeesu ji'oota shaniif adda bahanii turaniiru.
Poolisiin sagantaa BBC Biraaziliiti akka himetti morma keessa waraanamuun ajjeefamte.
Saandiraan isa dhiistee nama biraa waliin jaalala keessa waan jirtuuf akka aaree yakkicha ishee irratti raawwate ragaan viidiyoo agarsiisu argameera.
Adabbiin isarra gahus akka hin jirre moobayila isaan erga waraabee walumaan gara ulfina gooftatti deemna jedhee innis galgaluma sana kutaa ciisicha isaanii keesstti of fannisee du'e.
Kun ammoo yakka badanii balleessuu fakkaata.
Goodayyaa suuraa Maariyaa Aeeliyaa Vaayilaat
Maariyaa Aeeliyaa Vaayilaat 36 Faransaay
Maariyaanis abbaa warraa isheedhaan waraanamtee duute.
Gaa'ilaan waggoota afuriif erga jiraatanii booda adda bahaniiru.
Erga aalbeedhaan ishee waraanee ajjeesee poolisiitti harka kennatus guyyota muraasa booda mana hidhaa keessatti of ajjeese.
Ajjeechaan ishee kun gaafuma mootummaan Faransaay miidhaa biyya keesatti dubartoota irra gahu hanbisuuf karoora baasu irra raawwate.
Goodayyaa suuraa Yaadannoo Maariyaa Aeeliyaa Vaayilaatiif taasisame
Ajjeechaa dubartoota irratti raawwatu gabaasuuf maaltu barbaachisa?
Odeeffannoolee kannneen Gareen gaazexeessitoota BBC Monitoring fi qorattootaa gabaasota ajjeechaa dubartootaa karaa TV,raadiyoo, maxxansaalee fi miidiyaalee hawwaasaa darban xiinxalu.
Kun gaafa Onkoloolessa 1 bara 2018 gaggeeffame.
Guyyaa tokkotti adunyaa irraa dubartootni 47 ajjeefamuu ragaa walitti qaban. Nuyis muraasa kan isiniif qoodne yoo tahu kan kaayyoon ajjeechaa isaanii hin baramnee fi eenyutu raawwate kan jedhus adda hin baane baay'eetu jira.
Akka ragaan Dhaabbata Mootummota Gamtoomanii haaraan agarsiisutti miidhaan dubartoota irra gahu hedduun isaa hoggantoota mootummaaf hin gabaafamu kaan ammoo ni dhoksama.
Ribqaa Iskiipeejii, pirojektii BBC Monitering dursaa kan jirtu, lakkoofsa dubartoota ajjeefamanii caalaa haalli miidyaaleen jireenyaa fi du'a isaanii itti gabaasan adunyaa irratti ilaalcha dubartootaaf jiru agarsiisa jette.
Ragaan kunis ajjeechaa guyyaa tokko keessatti qofa raawwate yoo tahu ragichaa argachuuf garuu ji'a tokko guutuuf hojjetameera. Ajjeechaan kaan erga turee gabaafamaa kan ture yoo tahu kaan ammoo odeeffannoo gahaan dhibamuun turaniiru jette.
Lakkoofsa dubartoota ajjeefamanii osoo hin gabaafamiin, xiyyeeffannoo miidiyaa hin argatiin akkasumatti hafaniis yoo ilaallu garuu lakkoofsichi kanaa ol tahuu danda'a.
Egaan sagantaan BBC 100 Women wagga waggaan dubartoota cicimoo fi dhiibaa uumuu danda'an 100 filachuun seenaa isaanii isiniif qooduun hojjeta. Akkasumas xiyyeeffannoon mirga dubartootaaf akka kennamuuf kaayyeffatee hojjeta.
Viidiyoo Africa Eye: Ajjeechaa durbartootaafi daa'immanii haqa malee taasifame
Aanga'aan Keeniyaa: 'Ajjeechaa gara jabinaa' jaalallee isaa ulfa taateen himateme
Ajjeechaa Laas Veegaas: Hiriiyaan dubartii Paadook waa'ee balaa akka hibeekne dubbattee